Ogaden News Agency (ONA) – Wargayska Africa Confidential oo Itoobiya Wax Ka Qoray.
Wargayska Africa Confidential oo Itoobiya Wax Ka Qoray.
Posted by Dulmane	/ August 29, 2016
Wargayska caalamiga ah ee Africa Confidential ayaa soo daabacay maqaal aad uxiiso badan oo uu kaga waramayo xaalada dhabta ah ee maanta uu kusugan yahay taliska xukuumada TPLF.
Wargayska ayaa maqaalkiisa cinwaan uga dhigay Sumcadii Itoobiya oo Dhulka Taala wuxuuna wargaysku qormadiisa ku yidhi ” waxaa meeshii ugu xumayd abid gaadhay sumcadii iyo karaamadii kooxda TPLF ee mudada dheer soo xukumaysay wadanka Itoobiya”.
Wargayska Africa Confidential oo helay xog hoose oo sir ah ayaa sheegay in shacabku dhamaan kaniyad jabeen xukunka madhalayska ah ee TPLF isla markaana ay shcabku hada usacab tumayaan isbadal dhinaca siyaasada ah iyagoo filaya in ay helaan madax banaani si ay ugu noolaadaan sida ay shucuubta dunidu unooshahay.
Wargayska oo qormadiisa siiwata ayaa sheegay in Gobolada ugu fog ay yihiin Ogadenia, Oromia iyo Gobolka Axmaarada wuxuuna wargaysku intaas kudaray in dhibkii taliska wayaanuhu uu Ogadenia kuhayay uu ku qabtay Gobolada Axmaarada iyo Oromada.
Sidoo kale wargayska oo soo qaadanaya cadaymo muhiim ah ayaa sheegay in gabi ahaanba sumcadii Itoobiya ee dunidu ay noqotay mid gabagabowday kadib markii dunida ay u cadaatay dhaqanka TPLF ee kudhisan xaglinta iyo garabsiinta beel gaar ah iyo Gobol gaar ah, sidoo kale dunida ayaa u kuur gashay qaabka ay Itoobiya u maamusho taageerada beesha caalamka taas oo la ogaaday in ay ku dhacdo jeebka koox gaar ah.
Guntii iyo gunaanadkii Warsidaha Africa Confidential oo kamid ah wargaysyada kuxeel dheer uruurinta siraha ayaa lafilayaa in uu soo daabici doono xogo badan oo uu Itoobiya kahayo.